जनावरको अंगप्रत्यंग जलाउन १ करोडभन्दा धेरै खर्च « Khasokhas Follow @khasokhasmag
जनावरको अंगप्रत्यंग जलाउन १ करोडभन्दा धेरै खर्च
हतारहतारमा तामझामसहित कार्यक्रम गर्दा खर्च बढ्यो –
जंगली जनावरका अंगप्रत्यंग (अखेटोपहार) जलाउन १ करोडभन्दा धेरै खर्च भएको छ । चोरी–तस्करी गर्ने गिरोहबाट बरामद भएका ४ सय १२ प्रकारका अखेटोपहार जलाउन सो रकम खर्च भएको हो । अखेटोपहार जलाउन सबै खर्च आइएनजिओले गरेको पाइएको छ । तर, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ताकेता गर्दा पनि आइएनजिओहरूले खर्चको विवरण पठाएका छैनन् । ‘हामीले खर्चको सबै विवरण आइएनजिओसँग मागेका छौँ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले भने, ‘खर्च गरेको करिब एक महिना पुगिसक्दा पनि आइएनजिओहरूले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । अब आधिकारिक रूपमा पत्र लेखेर खर्चको विवरण माग्छौँ ।’
‘यति धेरै खर्च हुँदैनथ्यो’
विकल्पमा छलफल नै नगरी अखेटोपहार जलाउँदा खर्च बढी लागेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग स्रोतले दाबी गरेको छ । ‘जंगली जनवारका अखेटोपहार जलाउन यति धेरै खर्च हुँदैन,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘विकल्पमा छलफल नै नगरी अखेटोपहार जलाउने काम भयो । धेरै अखेटोपहारलाई संरक्षण गरी अनुसन्धान र संग्रहालयमा प्रयोग गर्दा कम खर्च हुन्थ्यो ।’
४ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अखेटोपहार जलाउने निर्णय गरेपछि चार दिनमै हतारहतारमा चितवनको कसरामा सार्वजनिक रूपमा जलाइएको थियो । तामझामसहित गरिएको कार्यक्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत, वनमन्त्री शंकर भण्डारी, राज्यमन्त्री दीर्घराज भाट, जनसंख्या तथा वतावरणमन्त्री जयदेव जोशी, सरकारी कर्मचारीसहित उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू उपस्थित थिए । अखेटोपहार मूल्यहीन हुन्छ भन्ने सन्देश दिन कार्यक्रम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुन संस्थाले कति खर्च गरे ?
अखेटोपहार जलाउनुअघि १ करोेड १० लाखको अनुमान गरिएको थियो । सो रकम सरकारले खर्च नगरी आइएनजिओहरूले खर्च गर्ने योजना बन्यो । सोही योजनाअनुसार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, विश्व वन्यजन्तु कोष र जिओलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडेसेल)ले खर्च गरेका हुन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले ४० लाख, जेडेसेलले १० देखि १५ लाख र विश्व वन्यजन्तु कोषले ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले खर्च गरेको रकम अमेरिकी सहयोग (युएसएआइडी)ले बेहोरेको छ । जेडेसेलले अखेटोपहार संरक्षणमा खर्च गरेकाले जलाउँदा काम खर्च गरेको स्रोतले जनायो ।
कति जलाइए अखेटोपहार ?
सरकारले ९ चैत ०५४ मा अखेटोपहार जलाएको थियो । झन्डै २ दशकपछि ४ हजार १२ प्रकारका जंगली जनवारका अखेटोपहार जलाएको छ । आफँै मरेका र चोरी–सिकारी गर्ने क्रममा बरामद भएका ४८ प्रजातिका अखेटोपहार जलाइको हो । जसमा बाघको छाला ६७, गैँडाको खाग ३ सय ५७, हात्तीको पुच्छरको रौँ ३ सय ५४, कस्तुरीको विना ३४ थान, ध्वाँसे चितुवको छाला २ थान, हिउँ चितुवाको छाला १ थान छन् । यसैगरी चिरुको ऊन ४२ पोका, सालकको खपटा २ पोका, हाब्रेको छाला ४७ थान, चितुवाको छाला ४ सय १८ थान, भालुको पित्त १५ थानलगायत ४ हजार १२ थान अखेटोपहार नष्ट गरिएको थियो ।
संरक्षणमा राखिएको अखेटोपहार
वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानसँगै संग्रहालयका लागि भन्दै थोरै मात्र अखेटोपहार राखिएको छ । व्यवस्थित रूपमा नकुहिने गरी राखिने विभागले जनाएको छ । बाघको छाला ५, गैँडाको खाग १०, कस्तुरीको विना ४, चिरुको ऊन १ पोका, हाब्रेको छाला २, हिउँ चितुवाको छाला १ थान राखिएको छ । संरक्षित राखिने अखेटोपहार निकुञ्जको कार्यालय कसरामा भण्डारण गरिएको छ । १२ किलो हात्तीका दाह्रा पनि सुरक्षित राखिएको छ ।